Cosa significano i cristiani quando chiamano Dio 'Adonai' | PREGHIERA&NEWS
Ihe Ndị Kraịst Pụtara Mgbe Ha Na-akpọ Chineke 'Adonai'
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 24, 2020 Ọgọstụ 24, 2020
Kemgbe ụwa, Chineke na-achọ ka ya na ndị ya na-adị n'ezigbo mma. Ogologo oge tutu O zite Ọkpara Ya n ’ụwa, Chineke bidoro ikpughe Onwe ya n’ebe ụmụ mmadụ nọ n’ụzọ ndị ọzọ. Otu n’ime ndị mbụ bụ aha ya.
YHWH bu aha mbu mbu Chineke dere.MEchetara ya ma mekwa ya ka odi na ekwughi ya. N’oge ndị Gris (ihe dị ka 323 BC ruo 31 AD), ndị Juu hụrụ ọdịnala ahụ akpọghị YHWH, akpọrọ Tetragrammaton, n’ihi na a na-ele ya anya dị ka okwu dị nsọ.
Nke a dubara ha ịmalite itinye aha ndị ọzọ na Akwụkwọ Nsọ na ekpere ekwuru. Adonai, bụ́ nke a na-akpọ mgbe ụfọdụ “adhonay,” bụ otu n’ime aha ndị ahụ, dịkwa ka Jehova kpọrọ ya. Isiokwu a ga-achọpụta ịdị mkpa, ojiji na ịdị mkpa nke Adonai na Baibul, n’akụkọ ihe mere eme na taa.
Gịnị ka "Adonai" pụtara?
Nkọwa nke Adonai bụ "Onyenwe anyị, Onyenwe anyị ma ọ bụ nna ukwu".
Okwu a ka ana-kpo otutu ma obu otutu. Otu Chineke di, mana ejiri otutu mmadu mee ihe dika akwukwo ndi Hibru iji mesie ike, na nke a, na-egosi ochichi nke Chineke. ”Ma obu“ Chineke, Chinekem ”.
Adonai gosiputara n'echiche nke inwe na ibu onye nlekota nke ihe. Akwadoro nke a n’ọtụtụ akụkụ akwụkwọ nsọ nke na-egosi Chineke ọ bụghị naanị dị ka Nna-ukwu anyị, kamakwa dịka onye nchekwa na onye na-eweta ọrụ.
“Ma mara na unu gātu egwu Jehova, were obi-unu nile fè Ya òfùfè n'ezi-okwu; tụlee nnukwu ihe O meere gị ”. (1 Samuel 12:24)
Olee ebe e dere aha Hibru a maka Chineke na Baịbụl?
Aha ahụ Adonai na ụdị dị iche iche a na-ahụ n'ihe karịrị narị amaokwu anọ na Okwu Chineke.
Dị ka nkọwa ahụ si kwuo, iji nwere ike ịnwe njirimara nwere. Dị ka ihe atụ, n'akụkụ a nke Ọpụpụ, Chineke kpọrọ Mosis ka ọ kpọsaa aha aka ya mgbe ọ na-eguzo n'ihu Fero. Mgbe ahụ onye ọ bụla gaara amata na Chineke kwuru na ndị Juu dị ka ndị nke ya.
Chineke gwakwara Mozis, sị: “Gwa ụmụ Izrel, sị, Jehova, bụ́ Chineke nna nna unu hà, na Chineke Ebreham, na Chineke Aịzik na Chineke Jekọb, ezitewo m ka m bịakwute unu. Nke a bụ aha m ruo mgbe ebighị ebi, aha ị ga-akpọ m site n’ọgbọ ruo n’ọgbọ. "(Ọpụpụ 3:15)
Mgbe ụfọdụ, Adonai na-akọwa Chukwu na-achọ ikpe ziri ezi maka nke ya. E nyere Aịzaịa onye amụma ọhụụ a banyere ahụhụ na-abịanụ maka eze Asiria maka omume ya megide Israel.
N'ihi nka ka Onye-nwe-ayi, Onye-nwe-ayi, bú Chineke Nke puru ime ihe nile, g sendji zisa ndi-agha-ya; n’okpuru bọmbụ ya, ọkụ ga-amụnye ọkụ dị ka ire ọkụ. (Aịzaya 10:16)
N'oge ozo Adonai na-ebu mgbanaka otuto. Eze Devid, tinyere ndị ọzọ na-abụ abụ ahụ, rejoụrịrị ọ inụ n'ịkwado ikike Chineke ma jiri nganga kwupụta ya.
Jehova, Onye-nwe-ayi, Le otú aha Gị dị ebube n’ụwa niile! I debe ebube-Gi n’elu-igwe. (Abụ Ọma 8: 1)
Jehova emewo ka oche-eze-Ya guzosie ike n’eluigwe; (Abụ Ọma 103: 19)
Ọtụtụ aha dị iche iche aha ahụ Adonai pụtara n’Akwụkwọ Nsọ:
Adon (Onyenwe anyị) bụ okwu Hibru. O ji ya mee ihe maka ndị mmadụ na ndị mmụọ ozi nakwa maka Chineke.
Sera we chìa ọchì n'obi-ya, si, Ike agwụm, onye-nwem emewo agadi, m'g Ime ihe-utọ a? (Jen 18:12)
Adonai (Jehova) aburula onye ejiri ihe eji eme ihe n’ebe ndi ozo.
Ahurum Jehova, Nke di elu di kwa elu, Onye nānọkwasi n'oche-eze; Ma uwe mwụda ya juru n’ụlọ nsọ ahụ. (Aịsaịa 6: 1)
Adonai ha'adonim (Onye isi kachasi ihe nile elu) bu nkwenye siri ike banyere odidi ebighebi nke Chineke dika onye ochichi.
Kelee Onye-nwe ndị nwenụ: ịhụnanya ya na-adịru mgbe ebighi ebi. (Abụ Ọma 136: 3)
Adonai Adonai (Onye nwe YHWH ma obu onye nweayi Chineke) gosikwara na oruru o ruuru Chineke.
N'ihi na I rọputawo ha site na mba nile nke uwa ka ihe-nketa-Gi, dika O kwuru n'aka Moses, bú orù-Gi, mb broughte I mere ka nna-ayi-hà si n'Ijipt puta. (1 Ndị Eze 8:53)
N'ihi na Adonai bụ ezigbo aha Chineke
Anyi agagh aghota Chineke nke oma n life a ndu anyi, ma anyi puru to mu ndi ozo banyere ya. Yingmuta aha ya nile bu uzo di nkpa ihu ihu omume ya. Mgbe anyị hụrụ ha ma nabata ha, anyị ga-aba na mmekọrịta anyị na Nna anyị nke bi n’eluigwe.
Enyịn̄ Abasi ẹsọn̄ọ ẹda ẹwụt mme n̄kpọ emi ẹnyụn̄ ẹn̄wọn̄ọ ẹnọ nnyịn. Otu ihe atụ bụ Jehova, nke pụtara “Abụ m” ma na-ekwu okwu banyere ọnụnọ ya ebighị ebi. O kwere anyị nkwa iso anyị jee ije ruo ogologo ndụ.
Ka ndị mmadụ wee mara na gị onwe gị, onye aha gị bụ Ebighị Ebi, bụ Onye Kasị Elu n’ụwa niile. (Abụ Ọma 83:18 Mb)
Ọzọ, El Shaddai, atụgharịrị ka “Chukwu Pụrụ Ime Ihe Niile”, nke pụtara ike Ya ịkwagide anyị. O kwere nkwa na ya ga-egboro anyị mkpa anyị niile.
Ka Onye Pụrụ Ime Ihe Niile gọzie gị ma mee ka ị mịa mkpụrụ ma mee ka ọnụọgụgụ gị bụrụ obodo nke ndị mmadụ. Ka o nye gi na nkpuru gi ngozi enyere Abraham ... (Jenesis 28: 3-4)
Adonai na-agbakwunye eriri ọzọ na mpempe akwụkwọ a: echiche bụ na Chineke bụ isi nke ihe niile. Nkwa ahụ bụ na ọ ga - abụ ezigbo onye nlekọta nke ihe o nwere, na - eme ihe ka ọ bụrụ ihe ọma.
Ọ sịrị m: '' bụ Ọkpara m; m ghọrọ nna gị taa. Rịọ m ma aga m eme ka mba nile bụrụ ihe nketa gị, nsọtụ ofwa ka ọ bụrụ nke gị. '(Abụ Ọma 2: 7-8)
3 ihe mere na Chineke ka bu Adonai taa
Echiche nke ịnwe nwere ike ịkpalite onyonyo nke otu onye nwere onye ọzọ, ụdị ịgba ohu ahụ enweghịkwa ọnọdụ n'ụwa taa. Mana anyi aghaghi icheta na echiche nke Adonai gbasara onodu ochichi nke Chineke na ndu anyi, obughi mmegbu.
Akwụkwọ Nsọ kwuru n'ụzọ doro anya na Chineke nọ ya oge niile na Ọ ka zie ezie na ọ bụ Onye-nwe ihe niile. Anyị ga-edo onwe anyị n'okpuru Ya, ezigbo Nna anyị, ọ bụghị n'aka mmadụ ọ bụla ọzọ ma ọ bụ arụsị. Okwu ya na-akụzikwara anyị ihe kpatara nke a ji bụrụ akụkụ nke atụmatụ kachasị mma nke Chineke maka anyị.
1. Ekere anyị ka anyị chọọ Ya dịka Nna anyị ukwu.
Ọ bụ kwuru na onye ọ bụla n’ime anyị nwere oghere ha ka chi. Ọ bụghị ebe ahụ ka anyị mee ka ike gwụ anyị na enweghị olileanya, kama ka anyị duga anyị na Onye nwere ike igbo mkpa ahụ. Gbalị imeju onwe anyị n'ụzọ ọ bụla ọzọ ga - eduga anyị n'ihe ize ndụ: ikpe na-adịghị mma, enweghị uche na nduzi Chineke, n'ikpeazụ, enyefe mmehie.
2. Chineke bụ ezigbo onye nkuzi.
Otu eziokwu gbasara ndụ bụ na onye ọ bụla na-ejere mmadụ ozi n'ikpeazụ ma anyị nwere nhọrọ maka onye ọ ga-abụ. Cheedị ijere nna ukwu nke gosipụtara gị iguzosi ike n'ihe ịhụnanya na-enweghị atụ, nkasi obi, na ọtụtụ ihe. Nke a bụ ịhụnanya nke Onyenwe anyị nke Chineke na-enye ma anyị achọghị ịlafu ya.
3. Jizọs kụziri na Chineke bụ Nna ya ukwu.
Ọtụtụ oge n’ozi Ya n’ụwa, Jizọs matara Chineke dịka Jehova. Nwa nwoke jiri obi ya bia n’uwa n’irubere Nna Ya isi.
Ì kweghi na Mu onwem nọ nime Nnam, Nnam nọ kwa nimem? Okwu m gwara gị, ekwughi m maka ikike m. Kama, obu Nna m, onye bi n’ime m, na aru oru ya. (Jọn 14:10)
Jizọs gosiri ndị na-eso ụzọ ya ihe ido onwe ha n'okpuru Chineke dịka Nna-ukwu pụtara. Ọ kuziri na site n’iso ya na ịrara onwe ya nye Chineke, anyị ga-enweta nnukwu ngọzi.
Agwawom unu ka ọ myùm we di nime unu, ka ọ yourù-unu we zuzu. (Jọn 15:11)
Ekpere diri Chineke dika Onye nke gi
Ezigbo Nna bi n’eluigwe, anyị were obi obi umeala bịa n’ihu Gị. Dika anyi mutakwu banyere aha Adonai, o chetara anyi ebe ichoro ka anyi nwee ndu anyi, ebe kwesiri ekwesi. Achọrọ m ido onwe anyị n'okpuru, ọ bụghị ịbụ onye isi ike n'elu anyị, kama ka ọ bụrụ Eze anyị na - ahụ n'anya, rịọ maka nrube isi gị ka i wee wetara anyị ngọzi ma jupụta anyị n'ezi ihe. I nyekwara anyị otu Ọkpara gị naanị ka ọ bụrụ ihe ngosipụta nke ụdị ọchịchị gị dị.
Nyere anyị aka ịghọta ihe miri emi nke aha a. Ka mmeghari anyi n’ezighi ezi duzie ya, kama n’ezi eziokwu nke Okwu gi na Muo Nso. Anyi choro ịkwanyere gi ugwu Onyenwe anyi, ya mere anyi n’ekpe ka amamihe nyefee anyi n’aka Nna anyi ukwu.
Anyi n’ekpe ekpere n’ihea niile n’aha Jisos.
Aha ahụ bụ n’ezie onyinye sitere n’aka Chineke nye anyị, ndị ya. Ọ bụ ihe mmesi obi ike na Chineke na-achịkwa. Ọ bụrụ na anyị amata onye Jehova bụ, anyị ga na-ahụ n ’ịdị mma ya.
Ọ bụrụ na anyị ekwe ka ọ gbazie anyị, anyị ga-enwe amamihe. Dịka anyị na-edo onwe anyị n’okpuru ọchịchị Ya, anyị ga-enweta ọńụ karịa n’ozi na udo nke ichere. Ikwe ka Chineke bụrụ Nna-ukwu anyị na-ewetara anyị nso na amara Ya pụrụ iche.
Asim Onye-nwe-ayi: “are bụ Onye-nwem; ewezuga gi enweghi ihe di nma. (Abụ Ọma 16: 2)
Nke gara aga Post Gara aga post:Pope Francis: 'Onyinye ndị Kristian abụghị ọrụ ebere dị mfe'
Next Post → Post ozo:Nkwuwa okwu taa 24 August 2020 ka inwe graces